Mararka qaarkood waan iska qoslaa! | Martech Zone
Axad, Sebtembar 3, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waa inaan kuu sheegaa dadyowga… post ugu dambeysay wuxuu ahaa mid ka mid ah xiisaha ugu badan ee aan abid qoro. Sida adiga waa in ku arko sawirkeyga cinwaanka, si dhif ah naftayda si dhab ah uma qaado. Sidoo kale, waagii hore waxaan xoogaa wax ka qoray waxa aan ka fikirayo inaan ku qiyaaso guushaada waxa ay dadka kale kaa sheegaan. Guusha blog-ka laguma cabbiri karo dibedda, adigaa iska leh!
Iyada oo ay taasi jirto, waa inaan qiraa inaan kulligiin isku maleeyay. Waxaan doonayay inaan arko falcelinta aqristeyaasheyda… iyo barta internetka… markii aan qoray cinwaankeyga aadka u liita ee ka maqnaa 'balooggeygu waa ka fiican yahay bartaada'. Waxay ahayd gabi ahaanba carrab dhabanka, laakiin waa inaan arko falcelinta. Waxay ahayd wax aad u qosol badan! (Fadlan… Waxaan ballanqaadayaa inaan kula qoslayo, ma ahan adiga!). Dadka qaarkiis waxay igu dareemeen xumaan aniga, qaarna waa la igu uumiyey, qaarna markaa waxay isbarbar dhigeen qiimeyntooda iyo qiimeynteyda, qaarna waxay tilmaameen in darajadu aysan wax shuqul ah ku laheyn sida wanaagsan ee balooggu u yahay.
Waxaan jecelahay inaan xariif noqdo mararka qaar si aan u arko in falcelintu… qaso dheriga sida ay sheegaan. Waxaa laga yaabaa in qaybta ugu qosolka badan ee tan (Waxaan rajeynayaa inaanan ahayn qofka kaliya ee qoslaya), waa in caan ka ahaanshaha gelitaankani uu igu dhaqaaqay # 70,178 qiimeynta Technorati.
Marka, suuq ahaan, waxaan u maleynayaa inay tilmaamayso waxyaabo dhowr ah.
Chris Baggott mar ii sheegay in mararka qaar ay wanaagsan tahay in muran dhexdiisa la joojiyo oo jawaab la kiciyo ay gabi ahaanba kaa caawin karto mustaqbalka fog istiraatiijiyadda shirkadda Micnaheedu maahan wax isdabamarin… wuxuu si fudud ula jeedaa inay keenayso fursad aad ku muujiso alaabtaada. Tusaalahan, waxaan filayaa inay shaqaysay!
Mararka qaarkood si fudud u soo jeedinta in aad ka muhiimsan tahay sida dhabta ah ayaa shaqeyn kara. Taasi, laga yaabee, inay tahay run murugo leh oo aan ku maareyn karno suuqgeyn. Sii wad inaad tiraahdid # 1 oo laga yaabo inaad maalin uun noqon doonto!
Waxaa laga yaabaa in dhowr bilood gudahood aan ku sameeyo weerar dhuumaaleysi ah oo aan sheegto inaan ahay # 1 blog-ka ku saabsan Suuqgeynta Aaladda oo aan arko halka ay aniga i gaarto. Waqtigaan la joogo, in kastoo, si fudud ayaan ugu faraxsanahay inaanan midkiinna ku luminin gelitaankeygii ugu dambeeyay!
Bloggeygu wuu kafiican yahay 99.86% dhammaan baloogyada kale!